Aayaha editorJuly 26, 2020
Sida laga soo xigtay talobixinta guurka badankood, daacadnimada iyo hagar la’aanta waa qeyb muhiim u ah xiriir kasta oo caafimaad qaba iyo guur wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, guurka iyo xiriirka badan ee guurka iyo xiriirku waxay la kulmaan dhibaato isku mid ah — dhibaatada ugu darani ee burburisa qoysaska waxaey katimaadaa lanoolaashaha xaas daneysato ah ama nin daneyste ah.
Haweeneyda danteeda uun eegata ayaa ah qofka muhiimada koowaad siisa baahiyaheeda oo xiiseynaya nolosheeda, mana eegto, kuma fekerto tixgalinta dareenka ninkeeda, iyada oo marwaliba rabta in wax walba ay noqdaan sida iyadu rabto iyada oo u maleynaya in dunidu ku tiirsan tahay iyada.
Intaa waan isla fahanay sowmaahan? Hagaag, xaaladaas, waa inaad iska hubisaa calaamadahan xun ee hoos aan kusheegi doono maadaama laga yaabo in xaaskaagu leedahay, taas oo waliba kaa caawin doonta inaad fahanto sida loola dhaqmayo lammaanaha danteedu uun umuuqato ee kudaneysta qofka kale ee xiriirku kala dhaxeeyo:-
Waxay kaa filataa inaad markasta garabkeeda joogto kaana hesho waxey rabto laakiin waligeed lagama yaabo in sida aad ugarab istaagtay oo kale ay kuu garab istaagto.
Guur caafimaad qaba, waa midka laga helo in labada qof ee isqaba ninka iyo naagtuba ay waqti waliba garbaha isheystaan si waliba oo duruufuhu yihiin.
Taasi micnaheedu waa in sanado dhawr ah oo guurka aad iskula joogtaan, labadiinnaba waxaad noqotaan saaxiibbadii isugu dhow isla markaana taageerada ugu weyn ka dhexeysa cudur iyo caafimaad iyo maalmo wanaagsan iyo kuwa xunba, sida nidarradi arooskaagu dhahayo.
Balse, si kastaba ha noqotee, guurkaaga, waxyaabaha run ahaantii hoos udhac baa soo wajaha iyo rajo xumo ku’aadan inuu sii wato marka ay nololi kaala dhaxeyso qof daneyste ah, waxay kaa filaneysaa inaad had iyo jeer la joogtid iyada laakiin marka ugu horeysa ee aad weydiisato inay markeeda gacan kusiiso, way ku diidaysaa ama kuu muujisaa culeys been ah oo heysta haba noqoto dhaqaale xumo iwm.
Waxay rabtaa inaad dhagaysato iyada, inaad horay u riixdo, dhiirigeliso oo aad aaminto iyada. Tan ugu muhiimsan, naagtani waxay rabtaa inaad ka tirtirto ilmadaheeda, dhoola cadeyso markaad lajoogto oo aad siiso taageerada ay u baahan tahay.
Si kastaba ha noqotee, iyadu weligeed adiga kuulama dhaqmayso sida ay ula dhaqanto dad kale maadaama qofkaani doonayo inuu maskaxiyan kucaburiyo si uu kaaga helo danihiisa.. taasi micnaheedu waa in dhaqanka aad ka’aragto mid kaduwan ay kula dhaqanto dadka kale ee ay lamacaamisho.
XIRIIRKA KAALA DHAXEEYA IYADA
Nasiib darro calaamadaha Jaceylka ay kuu qabto ama kuu muujiso waa mid shuruud kuxiran marwaliba
Lamaanahaaga noocaasi ah lagama yaabo iney kuu qalbi qaboojiso, kuuma noqoto dabeyshi garbahaaga uriixi laheyd gaarista halka aad hiigsaneyso waayo danteeda kama aragto horusocodkaaga maadaama qofkaasi yahay mid dantiisa uun eegta qofna aan unixin.
WAXEY KAHADASHAA UUN BAAHIYAHEEDA
Ahmiyad siinta naftaada ama danahaaga waa mid wanaagsan mana aha sinaba qaab dhaqan xumo ah ama daneysi ah, waayo qof waliba mudnaan wuu siin karaa farxadiisa shaqsiyadeed.
Balse, adiga iyo afadaada hada waxaad tihiin koox waana inaad noqotaan laba qof oo mideysan. Taasi micnaheedu waa in aad isku ilaashataan sida 2 ruux oo dambi weyn si wada jir ah ugeystay oo midba midka kale sirtiisa ilaalinaya waayo hadii midkood laogaado oo laxiro midka kale waa hubaal in laheli doono taas ayaana muhiim kadhigeysa ilaalinta dantooda mid wada jir ah oo labaduba dan ugu jirto.
Hagaag, hadaad la macaamilayso xaas daneysato ah, baahideedu had iyo jeer kaga muhiimsantahay wax waliba way kaa hor imaan doontaa adiga. Raalli ahaanshaheeda iyo raynraynteeda ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan adduunka, halka kuwaaga aan xitaa macno aysan u lahayn.
Naagta danteeda uun eegata dareen gaar ah masiiyaan mana tixgaliyaan sida ninkoodu dareemayo. Ma xiisaynayaan wanaaggooda oo waxa kaliya ee ay daneeyaan waa naftooda.
MARNA EEDEEDA MAQAADATO
Xiriir kastaa waa sida waddo laba dhinac ah. Waxay la macno tahay in labada qof ee xiriirku kadhaxeeyo ay tahay inay isku damqadaan taasi oo ka dhigaan inay isla shaqeeyaan. Suuragal ma ahan in hal dhinac uu qaato eedda oo had iyo jeer uu dambiile ku noqdo waxyaabaha xun ee dhacaya.
Taasi waa sax waxa ayna kadhacdaa oo Kaliyah lanoolaanshaha haweeneyda danteedu kama muhiimsantahay wax waliba; waa wax iska caadiya in labada qof ee isqaba ay isku dhacaan ama isdagaalaan balse lanoolaashaha qofka noocaan ah ayaa kamidno ah in aad marwaliba tahay ama lagugu eedeeynayo waxkasta oo aan dhammaystirnayn ama sida ay karabtay noqon waaya inkasto aay ufasirto si umuuqata danta guud ee qoyska.
Naagtani waligeed masuul kama saarna ereybixinteeda iyo ficilladeeda. Taabadalkeed, waxay kugu iftiiminaysaa inaad ama kaadhigeysaa inaad tahay dambiile, xitaa marka iyadu ay tahay qofka qalad sameeyay.
Inkasto aysan marwaliba dhicin, hadey dhacdo in naagtaadu kaa raali galiso qalad ay sameysay, uma sameyso si daacadi kudheehantahay ama qalbigeeda kaso go’day. Si kastaba ha noqotee, waxay had iyo jeer raadisaa hab ay kuu sheegto inaad ka xanaajisay iyada taasoo keentay inay si xun kuula dhaqanto ama aad adigu sabab u tahay dhaqankeeda sunta ah.
Waxaas oo dhami waa calaamad muujinaysa in naagtani aysan dan ka lahayn dareenkaaga iyo waliba inay tahay lammaanaha dantiisu marwaliba mudnaanta koowaad leedahay. Way iska cadahay inay ku ciyaareyso miyirkaaga maskaxda, iskudaya iskuna daydo inay kaa dhigto inaad u ekaato ninka xun marwalba, inkasta oo runta ay aad uga duwan tahay sida ay udhigto.
Haku sirin naftaada adigoo moodaya iney waxku run yihiin. Waxay si buuxda u la socotaa inay iyadu qaaddo qayb ka mid ah mas’uuliyadda dhibaatooyinka ku dhaca guudkaaga laakiin waxay si ula kac ah u dooratay inaysan samaynin wanaag iyado aaminsan in ixtiraamku yahay doqonimo kahor istaageysa wax ay heli laheyd, jacaylkeeduna waa mid uun waqti kooban oo danteeda ay hesho ama dooneyso yimaada waana dabin ay marwaliba udhigto qaab maskaci kuduugantahay.
LAGAMA YAABO INEY KUDHAGEYSATO
Weligaa ma kugu dhacday inaad dareento in xaaskaaga aysan kusiinin fiiro gaar uyeelan waxyaabaha aad sheegeysid? Inay dhab ahaan wax dadaal ah gelinaynin si ay u fahamto aragtidaada iyo inaad gaarto heerka hoose ee shakhsiyaddaada xanaaq iyo ciil dartiis?
Hagaag, arintaas, waan ka xumahay inaan kuu sheego xaqiiqadeeda laakiin waxaad la macaamileysaa xaas xaasid iyo daneyste ah. Waxaad leedahay xaas aan marna dan kagalin waxaad u sheegto, kaasoo aan xitaa isku dayin inuu ku fahmo oo had iyo jeer ku mashquulsan iney badasho arinta muhiimka kuu ah iyadoo ubooda kahadalka arimo kale oo aan quseynin arintaada.
Markaad arinkaa ka fikirto, waxaad kujirtaa xiriir aad u liita ee xagga guurkaaga badanaana, waa qaladkaaga naagtaada. Iyadu waa kan aan tixgelinaynin aragtidaada isla markaana aan waligii istaagin daqiiqad kaliya si ay dareenkeeda kuusiiso.
WIXI DANTAADA AH MAKUGU GARABSIISO MUHIIMNA UMA ARAGTO
Adiga iyo naagtaada waxaad tihiin labo shaqsi oo kaladuwan. Kaliya maadaama aad tihiin dad isqaba, macnaheedu maahan inaad isula macaamishaan marwaliba sidii laba qof oo kaladuwan taasi oo kutimaada marka qofkiin uu maskaxdiisa kuxiro in eydan isfahmi Karin.
Si kastaba ha noqotee, markaad qof jeclaato, waxaad isku dayi doontaa sida ugu fiican ee ugu wanaagsan ee laguugu dari karo noloshooda. Waxaad ku dadaaleysaa dadaal aad ugu jeceshahay waxyaabaha ay jecel yihiin, si aad uhesho waxyaabo ay wadaagaan.
Si kastaba ha noqotee, naagtaada kama qeyb qaadatid danahaaga gabi ahaanba. Waxay diidaysaa inay ku lug yeelato wax aad jeceshahay inaad qabato, in kastoo ay ogtahay inaad taasi kufarxi laheyd.
Fekerkeed ayaa ah iney adagtahay wax usameynta jacaylkeeda dartiis, xitaa haddii ay doorbidayso majaajilada jaceylka ah, weyku adkaataa inay kuu raacdo riwaayadaha si aad iskula daawataan kooxda aad kahesho xitaa haddii ay jeclaan laheyd weyka noqotaa rabitaankeeda.
Hadaba qalad haii fahmin — qofna uguma baaqayo isku dayga inuu badalo dhaqankeeda waayo waa mid aanan suurto galeynin oo aad kudaaleyso uun maadaama qofkani uu nolosha kafahmay noocaasi daneysiga ah… balse si kastaba ha noqotee, way u fiicnaan lahayd iyada inay sameyso waxoogaa tanaasul ah adiga dartaa.
WAA QOF JECEL INUU TALIYO
Hal arin ayaa xaqiiq ah haddii ey tahay nooca dumarka jecel iney qofka xukumaan. Ma dareemaysid culeyska ay leedahay niyad ahaan haddii aad leedahay naag aad ogtahay ineysan kalaba labeynin wado waliba umarto helitaanka ama qaadashada waxa ay nolosha ka rabto.
Si kastaba ha noqotee, gebi ahaanba way ka sii darantahay marka ay kugu amar taagleyso kuuna muujiso iney kaa sareyso marka ay joogto agagaarkaaga, maadaama taasi ay tahay wax uun dadka daneysiga kuwanaagsan ayaa sameeyaan.
Tan iyo markii aad labadiinu is guursateen, iyada ayaa amarka iska laheyd. Wax walba waa inay ahaadaan sida ay iyadu rabto waxayna kaa filanayaan inaad si indho la’aan ah u adeecdo oo raacdo tilmaamaheeda.
Waqti kasta oo aad sameyso wax aysan jecleyn, dhibaatooyin aadan ogeyn ayaa soo baxa. Waxay umuuqataa inay ku jeceshahay oo keliya ilaa aad u oggolaato inay kuula dhaqmayso sidii iyada kuxigeenkeeda.
Naagtan ma fahmin in guurka farxadda leh uu ku saabsan yahay sinnaanta. Iyadu uma ogolaaneyso inaad kaqeyb qaadatid hanaanka go’aan qaadashada marka ay quseyso noloshaada waxeyna u egtahay inay iyadu adiga iska kaa leedahay ama aad moodo inaad qolka jiifka tahay.
Tanaasulki waa dhaqan aanan xisaabta marka ugu jirin ama aysan aqoonin naagtan. Lagama yaabo iney hal talaabo dhankaaga usoo qaado ama ay timaado meel dhexe xitaa haddii nolosheeda ay ku tiirsan tahay.
FURIIN AYEY KUUGU HANJABTAA HADII AY SIDEY RABTO WEYSO
Hadii aynu daacad uhadalno; Guur kasta iyo xiriir jacayl ayaa waja culeys iyo hubanti la’aan xaga mustaqbalka marka midkiin uu ugu hanjabo inuu ka baxayo xiriirka kala dhaxeeya qofka kale.
Marka ay halkaa xaaladu gaarto, waxaad u maleyneysaa in xiriirkaaga mustaqbal uusan laheyn oo aad u careysan tahay oo aad u aragtid inaad kafogaaneyso muran markaa socda.
Balse, Xaqiiqdii, naagtaada si shucuur ah kuula hadashaa. Waxay ku hanjabaysaa inay kaa tagayso mar kasta oo ay wax u dhicin sidii ay rabtay ama u qorsheysay, taasina waa wax aan ahayn guur farxadi kusii jira.
Asal ahaan, waxaad dareentaa rajo la’aan oo ma aragtid meel aad uga baxdo. Haddii aad u sheegto aragtidaada, oo aan la mid aheyn tan, waxay kuhanjabi doontaa furiin.
Dhamaadka maalinta, haddii aad rabto inaad guurkaaga sii haysatid ama aad kufekertay in lanoolaashaha qofka noocaan ahi ay dantaadu kujirto, ma lihid ikhtiyaar kale oo aan ahayn inaad iyada waxa ay rabto uun aad sameyso, amarkeeda aad raacdo aad kasamirto xiriir sinnaan kusaleysan.
SARENTEEDA AYAA KAHOREYSA WAX WALIBA
Dhammaanteen waa inaan lahaanaa qab xadidan oo aan ku dadaalnaa sidii aan u ilaalin lahayn sharafteena. Si kastaba ha noqotee, jacaylku waa inuu had iyo jeer ka sarreeyaa waxyaalahan; Dabcan, taasi waa haddii aan ka hadlayno jacayl run ah.
Hagaag, taasi maahan sida ay xaaskaagu u aragto. Xaqiiqdi, iyadu waa qof naftiisa keliyah ay lasareeyso isla markaana jacaylku uu layahay wax aan muhiim aheyn inkasto laga yaabo in qalbiga afadaadu uu meel kale jiro taasi oo ah qiyaano xanuun badan.
Markaad labadiinuba murantaan, dan kama lihin inaad heshiishaan. Iyadu ma xiiseyneyso in dagaalkaaga uu noqdo mid aad xal kugaartaan balse waxay kaliya danaynaysaa inay caddeyso mawqifkeeda iyo inay noqoto mida kaa guuleysata gar iyo gardarabo.
Markaad eegto arimahan, waxaad aqbali doontaa in naagtaada ay uga muhiimsantahay sareynteeda iyo danaheeda adiga jacaylkaaga iyo mustaqbalka guurkaaga. Mararka qaar qofka noocaan wuxuu kuu arkaa inaad tahay mid markey doonto aay kadhaqaaqi karto ama labadali karo.
MA MUUJISO MASUULIYAD XAGA DHAQAALAHA AH
Reerku wuxuu leeyahay ilo dakhli oo ay kutiirsanyihiin haba noqoto ninka oo reerka ushaqeeya waana wax muhiim u ah jiritaanka qoyska — sidaa darted dhisidda mustaqbalka reerka waa waajib si wada jir ah u saaran labada qof ee isqabta.
Balse Si kastaba ha noqotee, naagta noocaan ah waa mid aan muujinin xilkasnimo ama masuuliyad marka ay timaado arimaha dhaqaalaha, qarashaadka, biilka iwm.
Qalad haii fahmin — qof waliba wuu jecelyahay inuu siiyo xaaskiisa qarashaadka ay muhiim utahay – balse. si kastaba ha noqotee, dhab ahaan maahan cadaalad in ay kaa fileyso in aad ka bixiso dhammaan kharashaadka ay doonto oo idil ama kabadan baahideeda maadaama qofka aan taajirka aheyn maalkiisa uu marwaliba iska koobanyahay. Ma tixgaliso cabashadaada xaga qarashaadka badan iyado oo kuula dhaqanka marka aad ucabatoi sidii adiga oo aan jirin iyo sidii inaadan xubin ka ahayn qoyska.
Tusaale ahaan, had iyo jeer lacag ayaa ku filan guriga dhexdiisa balse damaceeda ayaa marwaliba ah iney xaq u leedahay iney kaa qaado qarashaad dheeraad ah oo aanan muhiim aheyn taasi oo keenta dhaawac dhaqaale oo kusoo wajaha.
MARNA KUUMA MAHADCELISO
Mahadcelintu wa mid kamid dabeecadaha ugu muhiimsan ee bini aadamku yeesho isla markaana sare uqaada xiriirka iyo xushmada dadka kadhxeeysa, balse haweeneyda daneysatada ah marna kuuma mahadceliso iyadoo u aragta mid iyada u ekeysiineysa iney daciif tahay taasi oo kadhigan ineysan marna abaal kuu heynin maadaama ay kuu aragto inaad tahay qof ay ka leedahay dan aan sidaa uweyneyn, isla markaana ay kaa gudbi doonto marka ay hesho qofkale oo ay ugu daneysato sida adiga ay kuugu daneysato si kabadan.
Sidaaasi darteed, qubarada xiriirka nolosha waxey kutilmaamaan xiriirkoodu mid dhiigmiirad ah oo marwaliba aysan kalaheyn mustaqbal fog oo kamicno ah inuu yahay kumeel gaar iyadoo aan laeegin inta sano ee qofkaani aad wada nooleydeen.
WEY SOCOTAA… LASOCO QEYBTA LABAAD DHAWAAN INSHA ALAH
UGAAR AH DUMARKA: 3 Waxyaabood Iska Ilaali Marka Ay Noqoto Xiriir Cusub
Sideed Nooc Oo Ragga Kamid Ah Oo Ay Tahay In Gabar Walba Ay Guursato
5 Waxyaabood Cajiiba Oo Ay Leedahay Xaaska Wanaagsan